सुन्दरता बन्याे समस्या ! घरभित्रै कैदी बनिन् यी युवती, कारण यस्तो – Waikhari
गृहपृष्ठ विश्व सुन्दरता बन्याे समस्या ! घरभित्रै कैदी बनिन् यी युवती, कारण यस्तो
सुन्दरता बन्याे समस्या ! घरभित्रै कैदी बनिन् यी युवती, कारण यस्तो
एजेन्सी / कतिपयलाई आफ्नै सुन्दरता पनि अभिषाप बन्छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर रुसकी एक युवतीलाई भने यस्तै भएको छ । २६ वर्षीया एन्जेलिका केनोभा धेरै सुन्दर भएकै कारण घर भित्रै कैद हुनुपरेको छ ।एन्जेलिकाका अभिभावकले उनलाई घरबाट निस्कन दिँदैनन्, किनकी बार्बी डल जस्तै सुन्दर देखिनी आफ्नी छोरीलाई अरुले गलत नजरले हेरेको उनीहरु मन पराउँदैनन् ।
एन्जेलिकाले भनेकी छिन् – ‘मानिसहरु मलाई घरभित्रै कैद बनाएको सोच्छन्, तर यो निकै गलत हो किनकी मेरो बुबाआमा मेरो धेरै हेरविचार गर्नुहुन्छ ।’यद्यपी उनी कहिल्यै एक्लै घरबाट निस्कँदिनन् । आफूलाई व्वाईफ्रेन्ड बनाउने छुट पनि नभएको र बाहिरी दुनिया बारे धेरै अनुभव नभएको उनले बताएकी छिन् ।२६ वर्षकी एन्जेलिकाको लागि आवश्यक सर सामान उनकी आमाले किनेर ल्याईदिने गर्छिन् । कतिपयलाई उनलाई प्लाष्टिक सर्जरी गराएको आरोप समेत लगाएका छन् । तर यो आरोप झुटो भएको उनको भनाई छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् – कति वर्ष उमेर समूहका ब्यक्तीले महिना,हप्ता दैनिक सहवास गर्दा उपयुक्त ?
समय समयमा सार्वजनिक हुने सेक्सबारे गरिएका अध्ययनमा सेक्स पुनरावृत्तिबारे पनि विभिन्न धारणा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । तपाई कत्तिको सेक्स गर्न मन पराउनुहुन्छ ? सातामा एक, दुई या तीनपटक ? त्यसो त सेक्स जोडीको अवस्था, वातावरण तथा मुडमा पनि भर पर्छ । हालै सार्वजनिक गरिएको एउटा अनुसन्धान ‘ट्रेसी कोक्स’ ले भने सुखद सम्बन्धका लागि यौनसम्बन्धको आवृत्तिबारे विभिन्न सुझाब दिएको छ ।
अनुसन्धानअनुसार कतिपटक सेक्स हुन्छ भन्ने कुरा जोडीमा भर पर्छ । दीर्घकालिन जोडीका लागि लामो समय सेक्स गर्नु निश्चय नै अस्वाभाविक हुन्छ । अनुसन्धान अनुसार रमाइला जोडीले सातामा चार पटकसम्म सेक्स गर्छन् । सेक्सले मानिसलाई कत्तिको खुसी बनाउछ त ? जोडीले एक अर्कालाई बेडमा खुसी राख्नका लागि सेक्स गर्ने जादूमय संख्या छ त रु तर नयाँ अध्ययनले सेक्स जोडीको दीर्घकालिन सम्बन्धलाई कसरी रमाइलो पार्छ भन्नेलगायत अन्य रोचक पक्षलाई पनि खुलासा गरेको छ ।
हरेक दिन यौनसम्पर्क गर्ने जोडी यदि तपाई २५ वर्षभन्दा मुनि र भर्खरै सम्बन्ध बढाउँदै हुुनहुन्छ भने तपाईमा यौन जोसको कमि छैन । तर तपाईको जोडी बषौं पुरानो हो भने यौन कार्यमा पनि मन्दी आएको हुन सक्छ । तर केही वर्ष अगाडि धेरै जोडिको ध्यान तान्न सफल भएको ‘३६५ नाइट’ नामक पुस्तकको एक अंशलाई पढ्ने हो भने सेक्सले क्षणिक र दीर्घकालिन जोडी केही भन्दैन । लामो समयसम्म सँगै रहेका जोडीले ३६५ दिन नै सेक्स गरेको बताएका थिए ।
सन् २००४ को एक अध्ययनमा पनि एउटा निस्कर्ष आएको थियो – जति सेक्स ग¥यो त्यति नै जोडी खुसी हुन्छन् । ‘नर्मल बार’ नामक पुस्तकले पनि यस धारणालाई सही साबित गरिदिएको थियो । अमेरिकाका तीन प्रख्यात लेखकहरुद्वारा लेखिएको यस पुस्तकमा पनि हजारौं जोडीलाई के विषयले खुसी पार्छ भन्ने जिज्ञासा राखिएको थियो । जबाफ सबैको एउटै थियो –सेक्स । सातामा तीनदेखि चारपटक सेक्स गर्दा उच्च तहको सन्तुष्टि प्राप्त हुने अनुसन्धानकर्ताहरुले पत्ता लगाएका थिए ।
निश्चय नै सेक्सका लागि कुनै नियम छैन । यौन चाहनालाई नियमले बाँध्न पनि सकिदैन । अवस्था र उमेरले पनि यसलाई प्रभाव पार्छ । जस्तै तपाईका तीन चार वर्ष मुनिका तीन जनाभन्दा बढी सन्तान छन भने तपाईले चाहेर पनि नियमित सेक्स गर्न नसक्नुहोला । त्यस्तै कुनै अकल्पनिय घटना वा पीडामा हुनुहुन्छ भने तपाईको सेक्स आवृत्तिमा पनि अल्पबिराम लाग्ला । कामको थकानमा हुनुहुन्छ भने पनि सेक्सलाई अवश्य प्रभाव पार्छ । तर तपाई भर्खर २१औ बसन्त पार गर्दै हुनुहुन्छ र भर्खरै सम्बन्ध बढाउदै हुनुहुन्छ भने दिनमा एक पटक पनि थोरै हो । तपाईको तन्दुरुस्तीको तह, स्वास्थ्य अवस्था, तनाब, प्रतिबद्धता, करिअरप्रतिको दबाब, डिप्रेसन, उत्तेजना हुन सक्ने क्षमता, लगायत अनगगिन्ती तत्वले सेक्समा प्रभाव पार्छ् । एजेन्सी